कोरोना भाइरसबाट बच्न गाईको पि’साब र गोबर उपयोगी : यसरी प्रयोग गर्नुहोस् विधिसहित ! – Life Nepali
कोरोना भाइरसबाट बच्न गाईको पि’साब र गोबर उपयोगी : यसरी प्रयोग गर्नुहोस् विधिसहित !
एजेन्सी । को’रोनाभाइरस अहिले वि’श्वभर सं’कट सृजना गरेको छ। चीनको वु’हान शहरबाट फैलिएको को’रोनाभाइरसले अहिलेसम्म तीन सय चार जना मा’निसको मृ’त्यु भै’सकेको छ भने ह’जारौं मा’निसहरु सं’क्रमित भै’सकेका छन्। भाइरस २६ भन्दा बढी देशहरुमा फै’लिसकेको छ। वि’श्व स्वा’स्थ्य सं’गठनले को’रोनाभाइरसका का’रण वि’श्वभर स्वा’स्थ्य सं’कटकाल घो’षणा गरेको छ। विश्वभरका वै’ज्ञानिकहरु यस भा’इरसको सं’क्रमणबाट बच्न र यसको उ’पचार खो’ज्न दिन रात क’सरत गरिरहेका छन्। य’सैबीच भारतका एक स्वा’मीले यस भा’इरसबाट ब’च्न एक आ’श्चर्यजनक उ’पाए बताएका छन्।
उनले यस भा’इरसबाट बच्न श’रीरमा गौ “मुत्र” अर्थात् गाईको पि’साब” र गोबर” दल्ने सल्लाह दिएका छन्। यस्तो ग’जबको उ’पाय दिने भा’रतका स्वा’मी च’क्रपाणि म’हाराज हुन्। उनी हि’न्दू म’हासभाका अ’ध्यक्ष हुन्। शुक्रबार एक का’र्यक्रममा उनले को’रोनाभा’इरससँग ल’ड्न श’रीरमा गा’ईको पि’साब तथा गो’बर द’ल्ने” उपाए” बताएका हुन्। उनी भन्छन्,. ’यदि कसैले ओम नम शि’वाय स् भन्दै श’रीरमा गा’ईको गो’बर र पि’साब दल्छ भने उ भा’इरसको” सं’क्रमणको जोखिमबाट” बच्ने गर्दछ ।’
यो पनि पढ्नुहोस् – चीनलाई कोरोना भा’इरस नियन्त्रणका लागि एघार मुलुकको सहयोग”
कोरोना भा’इसरवि’रूद्ध जुधि’रहेको चीनलाई सं’युक्त राष्ट्रसंघ बा’लकोषका साथै विभिन्न ए’घार मु’लुकले भा’इरस नि’यन्त्रण र रो’कथामका ला’गि पठाएको सह’योग चीन पुगेको चीन सरकारका प्र’वक्ताले सो’मबार बताएका छन् । दक्षि’ण को’रिया, जा’पान, बे’लायत, फ्रान्स, ट’र्की, “पाकिस्तान, काजक’स्तान, हङ्गेरी, इरान, बेलारूस” र इनिडोनेसियाबाट कोरोना भा’इरस नियन्त्रणका लागि सामग्री’ उपलब्ध’ भएको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता” हुवा चुन्निङले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।
उक्त सा’मग्री आइतबारसम्म आइपुगेको उहाँले उ’ल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अन्य मु’लुकबाट पनि सहयोगका सामग्री आउने क्रम रहेको खबरहरू प्राप्त भएका उहाँको भनाई थियो । आवश्यक परेका वेला सहयोग गर्ने साथी वास्तविक साथी रहेको भन्दै सहयोगी सबैलाई ध’न्यवाद दिनुभयो । चीनमा को’रोना भा’इरसको स’ङ्क्रमणका का’रण मेडिकल मा’स्क, प्रोटेक्टिभ” सुट र सु’रक्षित चश्माजस्ता” सामानको जरूरी रहेको छ ।
Previous कोरोना भा’इरसका सं’क्रमित र स’म्भावित बि’रामीलाई उपचार गर्ने जि’म्मा अब नेपाली सेनालाई
Next आफ्नो श्री’मानसँग प्रेम गरेको भन्दै श्रीमतीले यु’वतीको यौ’नाङ्गमा खु’र्सानी द’लिदिइन् !